Red Wine Anti oxidant Nourishing Brightening Crystal Gel Sleeping Face Mask Wholesale - နှုတ်ခမ်း | မျက်စိ Cream| facial မျက်နှာဖုံး |L ကို Otion | facial Cream | မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ OEM / လိမ္မော်ရောင်, လက်ကားအရောင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » Red Wine Anti oxidant Nourishing Brightening Crystal Gel Sleeping Face Mask Wholesale
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ: Water, glycerin, hyaluronic acid, arbutin
supply အမျိုးအစား: OEM/ODM /SEMI FINI
လက်မှတ်ပေးခြင်း: GMP, ISO ကို
ကျား, မ: အမြိုးသမီး, Female/Male
လက္ခဏာ: အာဟာရဖြစ်စေသော, Firming, moisturizer
ထုတ်ကုန်အမည်: Red wine Sleeping Mask
လုပ်ဆောင်ချက်: Hydrating, brightening, အသားအရေစိုပြေ
MOQ:3အပိုင်းပိုင်း
Supply နိုင်ခြင်း: 1000 Kilogram/Kilograms per Day
Packaging Detail စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးတင်ပို့ထုပ်ပိုး
ဆိပ်ကမ်း Guangzhou Port, Foshan Port
အရေအတွက်(Kilograms) 1 –3>3
အရှေ့. အချိန်(ရက်ပေါင်း)7ညှိနှိုင်းရမည့်
ထုတ်ကုန်အမည် Face mask
Validity date သုံးနှစျ
Face Cream, မျက်စိ Cream, လက် Cream, Body Cream
Lemon, Honey, Lavender, Jasmine, Rose, Sakura, Stawberry, Mint, စသည်တို့.
အော်ဂဲနစ်ဗာဒံသီး, ဆီ, Organic olive oil, Arbutin, Hyaluronic acid, ဗီတာမင် E ကို, Vitamin C, Hyaluronic acid, Jojoba oil, Sea buckthorn oil, Shea ထောပတ်, Aloe vera, Collagen, Tea tree etc.
Anti-aging, Anti-oxidation, Firming, Skin Brightening, Moisturizing, အာဟာရဖြစ်စေသော, Repair sensitivity, Lighten dark circles, Whiten, စသည်တို့.